अनुभूति : बाको सिगरेट- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
अनुभूति : बाको सिगरेट
भाद्र १४, २०७६ सविता आचार्य
काठमाडौँ — प्रिय बा !हजुरले ल्याइदिएको जाली चप्पल उही दिन काटेर धुजाधुजा पारेँ । त्यस दिन मलाई र घरमै डेरामा बस्ने पुलिस अंकलकी मजत्रै सानी छोरीलाई एउटै रङका चप्पल ल्याइदिनुभएको थियो । तर त्यो मैले उही दिन छिनालेँ । हँसियाले काटेर धुजाधुजा पारेँ ।चप्पल मन नपरेर होइन बा ।
असाध्यै मन परेको थियो । तर मन परेर पनि काटेँ । कारण सम्झेर अझै पनि चकित पर्छु ।
बा ! चप्पलको रङ र आकारको धमिलो–धमिलो दृश्य आज यतिका वर्षपछि पनि आँखामा आउँछ झल्झली ।
त्यस दिन स्कुलबाट फर्कंदा मलाई रित्तो गोडामा देख्दाको हजुरको अनुहार आँखामा अझै पनि आउँछ । स्कुलबाट फर्केर ढोकाबाट अलक्कै पस्न थालेको थिएँ, खाली खुट्टै । हजुरले देख्नुहोला भनेर अलक्कै जान लाग्दा ट्याक्कै देख्नुभयो ।
‘चप्पल खै ? काँ हालिस् ? खाली खुट्टा किन हिँडेकी होस् ?’ जुन कुराको डर थियो हजुरले ठ्याक्कै त्यही सोध्नुभो ।
‘हरायो बुवा । चप्पल हरायो । हेडसरले बोलाएर उहाँको अपिसमा गथेँ, चप्पल बाहिरै खोलेर । फर्कंदा चप्पल थेनन् ।’ फ्याट्ट कथा हालेकी थिएँ । सम्झनुहुन्छ बा ? सम्झनुहुन्न होला है ?
मेरो जवाफपछि हजुरको आँखामा आक्रोश, माया, घृणा सबै एकनास आए । मलाई पिट्न मुठ्ठी उज्याउनुभएको थियो । आकाशमाथि गइसकेका हात खोइ किन हो आफैँ तल झरे । अनुहार शून्य भयो । अघि देखिएको रिस एकै पटक कता गयो गयो । फनक्क फर्कनुभो । दुई हात पछाडि लगेर सुइँसुइँ हिँड्नुभो, भुनभुनिँदै, ‘आइन्दा लाउलिस् चप्पल । अब खाली खुट्टा हिँड् ।’
घरछेउछाउका साथे चप्पल नलगाई नांगा खुट्टा हिन्थे । उनीहरू नांगा खुट्टा हिँड्दा मलाई पनि नांगै खुट्टा हिँड्न मन लाग्यो । रातो रङको त्यो पुतलीझैँ चप्पल लगाएर हिँड्न सकिनँ । बाटोमा पर्ने एउटी साथीको घरमा पसेर पिँढीमा भएको हँसियाले चप्पल धुजाधुजा पारेँ । सँगै गएकी एउटी साथीले भनकी थिई, ‘लुरी किन काटेकी होस् चप्पल ?’
‘तिमीहरू नांगा खुट्टा हिन्छौ मलाई चप्पल लाउन मन लागेन ।’ उनीहरू ट्वाँ परेका थिए । मलाई खोइ के भएको थियो त्यो बेला सम्झँदा अझै पनि जिल पर्छु बुवा ।
त्यसरी ढाँटे पनि आमालाई सही कुरा भनेकी थिएँ । आमाले हजुरलाई यो कुरा कहिल्यै भन्नुभएनछ । बरु उल्टै मलाई अर्को चप्पल किनेर ल्याइदिनुभएको थियो । हजुरले, ‘किन ल्याइस् यस्तो जतन गर्न नजान्नीलाई फेरि नयाँ चप्पल !’ भन्दा आमाले, ‘छोरीका गोडामा च्युरीढुंगा गढ्दैनन् ?’ भन्दै उत्तर फर्काउनुभएको थियो ।
प्रिय बा ! यतिका वर्षपछि तपाईंलाई बाको मुख हेर्ने दिन पारेर भन्न मन लाग्यो, त्यो दिन चप्पल हराएका थिएनन् है । हजुरको झैँ कमलो मनकी मलाई मेरा साथी नांगा खुट्टाले स्कुल जाँदा हजुरले ल्याइदिएको त्यो पुतली चप्पल धुजाधुजा पारेकी थिएँ । तर पर्सिनिकोर्सि आमाले अर्को चप्पल ल्याइदिएपछि फेरि त्यो पनि धुजाधुजा बनाउने आँट गर्न सकिनँ ।
प्रिय बा !
बाल्यकालका धमिलाधमिला सम्झना आज मनभरि आए ।
हजुरको सफा मन चुरोटले कालो बनाउँदै गरेको सम्झन्छु ।
बा ! हजुरको सफा मन चुरोटको ध्वाँसोले कालो बनाएको हजुरकी छोरीले मन पराएकी छैन है ।
अस्ति भर्खर फोनमा तपाईंसँग जिस्कँदा जिस्कँदै, ‘गाउँमा मोज छ हैन त बा । मीठो मीठो खानुभाहोला’ भनिहालेँ । त्यति भनेर सक्दा नसक्दै तपाईंको आवाज मधुरो भएको थाहा पाएकी थिएँ । मन निचोरिएको पनि थियो होला, मधुरो आवाजमै बिस्तारै भन्नुभएको पनि थियो नि, ‘तिमीहरू घरमा नहुँदा जे खाए पनि के मीठो हुन्छ र नानी । तिमीहरू पो कता कता घुम्छौँ, मान्छे भेट्छौँ, दिनभरि काम गर्छौं र सबै कुरा बिर्सिन्छौँ, कहिलेकाहीँ हामीलाई नै बिर्सिन्छौ...’
बा ! हजुरलाई त कसरी बिर्सन सक्नु । गाउँबाट राजधानी ‘लखेटिएका’ हामीजस्ता छोराछोरी सबैको कथा एउटै हो । बा ! गाउँमा तपाईं र आमा वरपीपल उभिएको एक्लो चौपारी भएर बस्नुभएको छ जसले कोही बटुवा पर्खिरहेझैँ लाग्छ । हाम्रोजस्तै सबै गाउँको हालत एकैनासको भएको छ बा अचेल । तपाईंको आवाज मधुरो सुनेपछि मलाई एकदम न्यास्रो लाग्यो । फोन राखेपछि हजुरसँगका पुराना याद झल्झली आँखामा आउन थाले ।
बा ! त्यो बेला पुष या माघको महिना हुँदो हो ।
एकाबिहानै हजुर ठूलोठूलो स्वरमा हाच्छिउँ गर्दै उठ्नुभयो । तपाईंको हाच्छिउँले जिम्माल टोल मात्रै होइन दर्भान गाउँ नै थर्किन्छ भन्थे सप्पै साथीले । त्यति ठूलो स्वरमा हाच्छिउँ गर्दा म पनि ब्युझिएँकी थिएँ ।
घरको तल्लो तलाको बीच्चको कोठा । चुल्हो पनि बीच्चमै थियो । फलामको ओदान गाडेको । हजुर उठेर आफूलाई तताउन चुरोट सल्काउनुभयो । अनि हामीलाई न्यानो बनाउन चिसो चुल्होमा आगो फुक्न थाल्नुभयो । ससाना दाउराको टुक्रा र थोरै खरका त्यान्द्रा चुल्होमा हालेर सलाई स्वार्र पार्नुभयो । आगो स्वार्र बल्यो । म हजुरको छेउमा गएर टुस्स बसेँ । म एकाबिहानै ओछ्यान छोडेर हजुरको छेउ पुग्नुमा मेरो आफ्नै स्वार्थ थियो । अँगेनाछेउ आगोको न्यानोमा बस्न हैन ।
हजुरलाई ‘न्यानो बनाउने’ चुरोट ओठबाट स्वाट्ट थुतेर फाल्नु थियो मलाई । चुरोटले बिगार गर्छ भन्ने कुरा स्कुलमा हरि सरले पढाएपछि म हरेक कोसिसमा लागिपरेकी थिएँ ।
हरि सरले भन्नुभएको थियो, ‘चुरोट सुर्ती खाँदा क्यान्सर हुन्छ । मान्छे मर्छ ।’ यो सुन्नेबित्तिकै म थरर्र काँपेकी थिएँ कक्षामै, तपाईंलाई सम्झेर । अनि मनमनै प्रण गरेकी थिएँ जसरी पनि चुरोट छोडाउन पर्‍यो भनेर ।
त्यसकारण, आमा उठ्नुभन्दा पहिले, दाइ–दिदी उठ्नुभन्दा पहिले म हजुर उठेको थाहा पाउनेबित्तिकै चाल मारेर भर्‍याङबाट ओर्लेर हजुरको चियो गर्न थालेकी थिएँ ।
त्यो दिन पनि झिसमिसेमै हजुरसँगै उठेर चियो गर्न थालेँ ।
चुल्होमा परेका दाउरा पुत्ताइरहेका थिए । जाडोको आकाशझैँ घुर्मैलो सर्टको बायाँ गोजीबाट हातका दुई औँलाले चुरोट झिक्नुभयो र बडो कलात्मक तरिकाले दुईओठको बीचमा चुरोट राख्नुभयो । लाग्थ्यो ओठमा बस्न पाउँदा चुरोटलाई बडो आनन्द आएको छ । तर मलाईचाहिँ सकस हुन थालिसकेको थियो । किनभने, कानमा सर गुन्जन थालिसकेका थिए– ‘चुरोट सुर्ती खाँदा क्यान्सर हुन्छ । मान्छे मर्छ ।’
मेरा हातझैँ मसिना झिँजाको टुप्पोमा रहेको आगो मुखनजिकै लग्नुभयो, र टाउको हल्का अगाडि बढाउनुभो । चुरोटको धूवाँ मच्चिँदै फोक्सोमा पुग्यो । मक्किएको भित्तातिर फर्केर एक गुजुल्टो धूवाँ मुखबाट बाहिर फ्याँक्नुभो । अनि चुरोट भएको देब्रे हात इत्ति पछाडि राखेर फु–फु गर्न थाल्नुभयो । बा ! जुन कुराको लागि म आफ्नो निद्राको माया मारेर हजुरको पछि लागेकी थिएँ त्यही काम फत्ते गर्न अब मलाई सजिलो हुँदै थियो ।
उता आगो भर्रर बल्न थाल्यो । यता मैले दाउ भेटिसकेँ ।
हजुरको दाहीने हातको बूढी र चोर औँलाले च्यापेको, भर्खर एक सर्को मात्र तान्नुभएको चुरोट स्वाट्ट तानेर हजुर आफैँले फुकेर बालेको आगोमा सेकेन्ड पनि समय नलगाई स्वाट्ट तानेर हाल्दिएँ । चुरोट पनि त्यही आगोमा मिसियो ।
अब हजुरको अनुहार आगोझैँ रात्तियो । आफूले एकसर्को तानेको चुरोट त्यसरी आगोमा बलिरहँदा हजुरको अभिमानमा पक्कै ठेस पुग्यो । घरी आगोमा बल्दै गरेको चुरोटलाई घरी मलाई हेर्दै गर्नुभयो । मलाई लागेको थियो, हजुरले केही गर्नु हुन्न । तर अचानक, मैले यति कुरा सोच्दा नसोच्दै हजुरका दह्रा हात मेरा गालामा बर्सिहाले ।
म आफ्नो मिसनमा सफल त भएकी थिएँ । गालामा छाप बर्सेका थिए, दुखेको पनि थियो खुब । तर, म रमाएँ । किनभने, म आफ्नो उद्देश्यमा सफल भएकी थिएँ ।
फेरि गाला रन्काउनुहोला भन्ने लागेर जुरुक्क उठेँ र माथितिर उक्लिएँ, उक्लिँदा उक्लिँदै चिच्याएँ, ‘ठिक्क पर्‍यो बूढा । खुब खाम्ला भनेथ्यौ होला !’
त्यसको केही दिनसम्म हजुर मसँग बोल्नु भएन । हजुरसँग जम्काभेट हुँदा, त्यही बिहान सम्झेर मनमनै दोहोर्‍याउँथे ‘ठिक्क पर्‍यो बूढा !’
हजुरको एउटा दर्शन थियो, केटाकेटीलाई पिटेरै तह लगाउनुपर्छ भन्ने । त्यसो हुदाँहुदै पनि सैयाँ दिदीले धेरै पिटाइ खाएको थाहा छैन मलाई । दिदी हजुरकी सीआईडी थिइन्, त्यसैले उनले खास पिटाइ खानुपरेन । सैयाँपछि हजुरको हातको सबैभन्दा थोरै पिटाइ खाने सायद म थिएँ । कान्छी छोरी, सबैकी लाड–प्यारमा हुर्किएकी । पिलिक्क रोइदिए पुग्यो । रोएर पनि भएन भने, आमाको धोतीको फेर समातेर अघिपछि गरे पुग्यो ।
त्यो दिन पनि मैले त्यही अपेक्षा गरेकी थिएँ ।
सम्झनुहुन्छ बा ? त्यो दिन बारी जोत्न मान्छे आएका थिए । बिहानै चिरिक्क हुने गरी घाम लागेको थियो । बारी जोत्न आएकाहरूलाई दिन आमाले अर्नी बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, रोटी तरकारी हो कि त !
अम्बाको बुटोमा चढेर खेलिरहेकी मलाई हजुरले बोलाउनुभयो, ‘काममा आएका मान्छेलाई पानी र अर्नी लइदे त नानी ।’
हजुरले मलाई पचासौँ पटक ‘लइदे त नानी’ भन्दा पनि मैले सुनिनँ । सुनेको नसुनेई गरेँ ।
खोइ किन हो काम अह्राएको पटक्कै मन परेन । म रूखमै खेलिरहेँ । बुवा म सम्झन्छु, मलाई मन नपरेको कुरा हजुरलाई पनि मन परेन ।
रूखको फेदमा आएर कराउनुभो, ‘तल झर्छेस् कि झर्दिनस् ?’
मुख बंग्याउँदै झरेँ ।
अचानक हजुर जोस्सिँदै आउनुभो । मेरो चुल्ठो ट्याप्प समातेर घिच्याउनुभयो । र, सान्सानो लौराले दुइटा खुट्टामा हिर्काउनुभयो । बा ! हजुरको रिसको पारो अलि धेरै नै चढ्थ्यो । त्यो दिन पनि जति चढ्नु पर्ने हो त्यति नै चढ्यो ।
अहिले सोच्छु, बा ! म त्यतिबेला हजुरले अह्राएको खुसी भएर गरेको भए हुन्थ्यो नि ।
अहिले सोच्छु, त्यसरी पिटाइ नखाएको भए सायद म जे छु त्यो बन्न सक्दिनँ थिएँ पनि ।
अर्नी बनाउँदै गरेकी आमा पाखुराले अनुहार पुछ्दै हजुरलाई तान्न आउनुभयो, ‘ए ! छोड्नुस् न के गर्नुभएको ।’
हजुर जोस्सिनुभयो, ‘तँ धेरै नकरा तैँले गर्दा हो यो यति जिद्दी भएकी !’
आमाले हजुरलाई तानिरहनुभयो, मैले पिटाइ खाइरहेँ हजुरको हातबाट ।
मैले गर्दा आमाले पनि बिनासित्ती गाली खानुभयो । आफ्नो दुखाइ त छँदै थियो, मेरो कारणले आमाले गाली खाएपछि मलाई त्यो घरमा बस्न मन लागेन । मलाई त एकाएक मर्न पो मन लाग्यो ! यस्तो घरमा बाँचेर के कामजस्तो लायो ।
‘म मोर्न जान्छु !’ चिच्याएँ ।
‘जा जा गैहाल् ! बाले काम अह्राउँदा मान्दिनस्, गै हाल् !’ हजुरले यसो भने पनि ‘बाले अह्राउँदा नाइँ भन्न हुन्न नि छोरी ! ज्ञानी पो बन्नुपर्छ’ भन्न खोज्नुभएको थियो, जुन म अहिले बुझ्दै छु बा । त्योबेला बुझ्न सकिनँ ।
आमाले मलाई फकाएर भित्र लैजान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो । म आमाको हातबाट फुत्केर अर्को कोठामा गएर बसेँ । एकै छिनमा एक गिलास दूधमा घ्यू मिसाएर ल्याउनुभयो । मेरो दाहिने हात समाउँदै गिलास थमाउनुभयो, ‘नरो नानी । यो खा । बाले माया गरेर पिट्नुभएको हो ।’
‘पिटेर पनि माया हुन्छ त ?’ यस्तै केही भनेकी थिएँ । मलाई लागेको थियो, पिटाइ र माया कसरी सँगसँगै बस्न सक्छन् र !
आमाले थमाएको दूध खान त के हेर्न पनि मन लागेन मलाई । कर गरेपछि आमाको लाडप्यारले पग्लिएँ कि । आँसुका धारा बगाउँदै खाएँ ।
प्रिय बा ! त्यसपछि दिनभर हजुर खोइ कता जानुभयो कुन्नि ।
मचाहिँ साँझ पर्दासम्म पनि कोठाबाट बाहिर निस्किइनँ ।
झमक्क साँझमा कताबाट आउनुभो र म भएको आँटीछेउको कोठाको ढोकामा उभिएर हाँस्दै गिज्याउनुभो, ‘ए अझै पनि यही झोँक्राएर बस्नुभाछ मेडम् ?’
मलाई खुब घोच्यो त्यो वाक्यले । दिउसो बाले पिट्दा घर बस्न मन नलागेको सम्झिएँ र, मलाई घरमा बस्न मन लागेन । केही बेरमा लुसुक्क बाहिर निस्किएँ । लागेको थियो, ‘मर्न जान्छु यो बूढाको घरमा बस्दिनँ !’
मेरो मनजस्तै अँध्यारो जताततै थियो । आजभोलिजस्तो बिजुली–बत्ती भएको भए सायद बाटो पनि उज्यालो हुन्थ्यो होला । घर्‍याङमर्‍याङ घाँसैघाँसमा जताततैबाट हिँडेर घरभन्दा अलि तल पुगेँ ।
अब मलाई बिस्तारै डर लाग्न थाल्यो । कतै कोही मान्छेलाई देखिनँ । डरले मुटु नै बाहिर आउलाजस्तो भयो । ओहो ! म त अब एक पाइला पनि अगाडि बढाउन सकिनँ । मर्न हिँडेकी म अँध्यारोसँग डराएँ । अहिले सम्झँदा रमाइलो लाग्छ ।
मलाई लिन घरबाट कोही आउँछ कि भन्दै घरी–घरी घरतिर हेर्न थालेँ । तर अहँ कोही आएन । कसैलाई थाहा भए पो कोही आउँथ्यो र बचाउँथ्यो मलाई । मलाई यति डर लाग्यो कि पाइला सार्न नसकेर थचक्क भुइँमा बसेँ ।
बा ! त्योबेला हजुर टुप्लुक्क आइदिएर मलाई काँधमा बोकेर घर लगेको भा हुन्नथ्यो र ?
डरले इत्रिएर बसिरहँदा परबाट अँध्यारोमा एउटा आकृति आफूतिर आउँदै गरेको देखेँ । नीलीकाली भएँ । बस्दा पनि भुक्लुक्कै ढल्छुजस्तो लाग्यो । मर्न हिँडेको म आफ्नो ज्यानको मायाले हुरुक्कै भएँ । आकृति बिस्तारै–बिस्तारै मेरोनजिकै आयो । आकृति, आकृति मात्रै थिएन । साक्षात् भगवान पो थियो मलाई बचाउनआएको ! काका रैछन् । नजिकै आएर भने, ‘नानी यति राति किन यहाँ आएको? के भयो ? हिँड घर । म त्यतै जान लाको ।’
‘जान्नँ म, त्यो बूढाको घरमा पाइलो हाल्दिनँ ।’
‘के भयो र ?’
‘मलाई पिट्ने मान्छेको घरमा जान्नँ ।’
‘कहाँ जान्छेऊ त यति राति ?’
‘मोर्न जान लागेको ।’
‘त्यसो भन्न हुन्न । बुवाले पिट्नुभएको होइन, माया गर्नुभएको हो ।’ काकाले त्यसो भन्दा अचानक मलाई हजुरको माया लागेर आएको थियो बा त्यो बेला !
डरले ओठ थर्रथराइरहेका थिए । काकाले मलाई जुरुक्क काधँमा बोके, ‘ल, हिँड घर ।’
घर पुग्दा आमाको अनुहारको बत्ती निभेको थियो । तर हजुरको अनुहार हेर्न सकेकी थिइनँ बा । डर लागेको थियो, फेरि पिट्नुहोला भनेर । हजुरले थाहा नपाउने गरी लुकेर हेर्न मन लाग्यो । हेरेँ ।
अझै सम्झन्छु, बा ! त्योबेला हजुरको अनुहार त नीलो–कालो भएको थियो । म घर पुगेपछि अनुहार बिस्तारै उज्यालो भएको थियो जुन मप्रतिको स्नेह र प्रेमको दियोले बनाएको उज्यालो थियो बा ! अझ, अनुहारमा छटपटी र ग्लानि पनि प्रस्ट देखेकी थिएँ ।
त्यो देख्दा म सानी बच्चीले हजुरलाई घुर्काउन पाएकोमा आनन्द आयो । हजुर मेरो नजिक आएर मेरो अनुहार छुनुभयो, आँखा छल्काउनुभयो । पैताला छाम्नुभयो अनि भान्छातिर फर्केर भन्नुभयो, आमालाई, ‘मेथी पड्काएर तेल तताएर ल्या त, नानीको खुट्टा मालिस गर्दिन पर्‍यो । दुख्यो होला...’
यत्ति वाक्यले म पग्लिएँ । बेस्सरी रोएँ हजुरको काखमामुन्टो घुसारेर । हजुरलाई दिएको दुख्खले मनमनै पीडा भयो । बा हजुरले आफैँले लौराले हानेर दुखाएको ठाउँमा आफैँले तेल मालिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो । अघिसम्मको मेरो वितृष्णा एकै झोक्कामा
हटेर गयो ।
तब न बा !
त्यस दिनपछि मैले अलि कम पिटाइ खान थालेँ । तर नि बा, हजुरले चुरोट खाँदाको घम्साघम्सी कायमै थियो ।
आजकाल, देखिने गरी चुरोट खानुहुन्न । बाहिर गएर खानुहुन्छ, घरभित्र आउँदा ह्वास्स गन्ध आउँछ चुरोटको ।
बा ! सुन्नुस् न ! बाको मुख हेर्ने दिन सन्तानले केही न केही दिनुपर्छ भन्छन् । तर, यसपालि हजुरसँग म केही माग्छु ।
बा – चुरोट खान छोडिदिनुस् न है... बिन्ती !
प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ११:१०
तीन हजार वर्षदेखि...
भाद्र ७, २०७६ हिमेश
ह्याङगिङ कफिन्स ? ओहो, के हो यो ? सुन्दै आश्चर्य लाग्छ । धेरैले यसबारे सुनेका पनि होलान् । तर, कमैले देखेका होलान् । जसले त्यसलाई देख्न पायो, त्यो त भाग्यमानी पो हो, हाम्रा टुर गाइडले हामीलाई यस्तै सुनाए । सायद हो पनि । मान्छेका मृत्युका संस्कार पनि गज्जब गज्जबका हुने गर्छन् ।
यत्ति गज्जब विरलै होला, मान्छे मरेपछि त्यसको शरीरलाई काठको बाकसमा राखेर पहाडमा झुन्ड्याउने । अचेल यस्तो चलन त रहेन नै ।
केही सय वर्षअगाडिसम्मको यो मृत्यु संस्कारले मानिसका प्रवृत्ति पनि कस्ता–कस्ता हुन्छन् भनेर सोच्न बाध्य पार्छ । केही दिन अगाडि मात्र चीन भ्रमणको मौका जुरेको थियो । अनि त्यसै क्रममा प्रत्यक्ष देख्न पाइयो, यिनै ह्याङगिङ कफिन्स । भनिन्छ, चीन वास्तवमै के हो त्यो बुझ्नै सकिन्न । बुझ्ने प्रयास गरे, जुनीजुनी पनि कम हुन्छ । त्यसै पनि ठूलो देश त्यसमाथि अथाह आश्चर्यका पोका यस देशसँग जोडिएका छन्, ह्याङ्गिङ कफिन्स त्यसमै पर्छ । सबैभन्दा पहिले पृष्ठभूमि नै ।
लिपिन सहरको चौकाचौध हेरिनक्सनु छ । चिनियाँ सहर एकाएक कसरी विकसित हुन्छ र त्यसले कसरी आफ्नो वैभव प्रदर्शन गर्छ, त्यसको राम्रो उदाहरण हो, सिचुवान प्रान्तको यो सहर । भन्न त भनियो, यो सिचुवानको चौथो ठूलो सहर हो । यस्तोमा स्वाभाविक प्रश्न हुन्छ, सिचुवान नै यस्तो छ भने योभन्दा ठूला सहर कस्ता पो होलान् ? चीनको दक्षिण पश्चिमी प्रान्तको राजधानी हो, छेन्दु । यतै भएर लिपिन पुग्नुपर्छ ।
यी दुई सहरबीच दुई सय किलोमिटरभन्दा केही बढीको दूरी छ । बुलेट ट्रेनले एकै क्षणमा छेन्दुबाट लिपिन पुग्ने सकिने अनुभव पनि दिन्छ । दुवैतिर हेरेपछि अनुभव हुन्छ, सायद छेन्दु नै कम आकर्षक छ, बरु त्योभन्दा लिपिन कति राम्रो कति राम्रो । भलै यो सहरको इतिहास केही हजार वर्ष पुरानो छ, तर भर्खरै बसेको सहर भन्दा हुन्छ । चीनले पछिल्लो समय केही सय सहर यस्ता विकास गरेको छ, जसको पर्याय नै हुन्छ, अत्यन्त व्यवस्थित । लिपिन यसमै पर्छ ।
लिपिनको विशेषता यति मात्र पक्कै होइन । लिपिन सहर मात्र होइन, यो जिल्ला पनि हो । निकै ठूलो छ । सहरलाई झन्–झन् विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ । हामी एक दर्जन जति नेपाली पत्रकार त्यहाँ पुगेका थियौं । हामीलाई भनियो, औपचारिक कार्यक्रममा लिपिन पुग्ने हामी नै पहिलो जत्थाका पत्रकार हौं र हामीलाई लिपिन के हो, यहाँ के के मात्र छैन, धेरै थोक सुनाइयो । अन्त्यमा हामीलाई के पनि भनियो भने ह्याङ्गिङ कफिन्स हेरिएन भने के पो लिपिन आएको दाबी गर्ने र ?
आखिरमा हामी त्यहाँ पुग्यौं पनि । ह्याङ्गिङ कफिन्सको चलन चीनमा मात्र छैन, अन्यत्र पनि छिटफुट पाइन्छ, विशेषतः फिलिपिन्स र इन्डोनेसियामा । तर यो चलन चीनमा बढी छ । चीनमा पनि केही प्रान्तमा मात्र । चीनमै पनि ह्याङ्गिङ कफिन्स छन् भन्ने थाहा भएको धेरै भएको छैन, केही सय वर्षअगाडि मात्र । जति बेलादेखि थाहा भयो, यससँग जोडिएका रहस्य सबै रहस्य नै छन् । सम्भवतः यी रहस्यको उत्तर कहिले पनि पाइने छैन । हामीले देख्न पाएका ह्याङ्गिङ कफिन्स भने गोङ नामको स्थानका पहाडका हुन् । लिपिन सहरबाट लगभग तीन घण्टाको बस यात्रापछि चट्टानै चट्टानको पहाडमा पुगिन्छ । चट्टानको पनि महासागर हो रे यो । केही सय वर्षअगाडिसम्म यहाँ बो जातिको बसोबास थियो । यिनीहरू त्यति बेला अहिलेको सिचुवान र युनान प्रान्तको सीमामा बसोबास गर्थे ।
यिनीहरूबारे प्रारम्भिक जानकारी इसापूर्व हजार वर्ष अगाडिसम्मको छ । त्यसो भनेको तीन हजार वर्षअगाडिसम्मको कुरा भयो । यो जाति अरूभन्दा धेरै फरक थिए र यसमा पनि सबैभन्दा फरक त मृत्यु संस्कार नै थियो । यिनीहरू मृतकको शरीरलाई काठको बाकसमा राखेर पहाडमा झुन्ड्याउँथे । यही संस्कारका कारण यी बो जाति प्रख्यात रहे । यी मृतकको शरीर राखिएका काठका बाकस साढे दुई हजार वर्ष पुरानासम्म भेटिएका छन् । नयाँमा चार सय वर्षसम्मका । अहिले बो जातिलाई यही संस्कारका लागि सम्झिने गरिन्छ ।
अझ रहस्य केमा छ भने त्यसपछि पूराका पूरा बो जाति सधैंका लागि इतिहासमै बिलायो । र, बिलायो उनीहरूको यो अनौठो न अनौठो मृत्यु संस्कार पनि । भनिन्छ, मिङ राजवंशको शासनकालको अन्त्यतिर तिनको सेनाले बो जातिको नरसंहार गरे । त्यसै पनि यो जातिका मान्छे धेरै थिएनन्, त्यसैले सजिलै पूरा जातिकै वंश नास गरियो । जति बाँचे, उनीहरू पनि कालान्तरमा अरू जातिमा बिलाए, उनीहरूले हामी पनि बो हौं भन्न सकेनन् । चीनको प्राचीन इतिहासबारे लेखिएको किताब पल्टाउनुपर्छ, त्यसमा लेखिएको छ, यस्ता ह्याङ्गिङ कफिन्स पहाडमा झुन्ड्याइएका मात्र छैनन्, गुफाभित्र पनि राखिएका छन् । केहीलाई भने चट्टानको बीचमा राखिएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी रहस्य भने पहाडमा झुन्ड्याइएका नै हुन् ।
गोङमा यस्तै ह्याङ्गिङ कफिन्स बढी देख्न पाइयो । यिनलाई सजिलै पुग्न नसकिने गरेर केही सय मिटरमाथि राखिएका छन् । धेरैलाई काठकै टेको दिएर राखिएको छ । पहिलो प्रश्न, यी कफिनलाई कसरी त्यस्तो जटिल स्थानमा पुर्‍याइयो त ? यसका केही अनुमान छन् । पहिलो, कफिन लिएर तिनका मान्छे सुरुमा पहाडको टुप्पोमा चढे, त्यसपछि डोरीको सहयोगले बाकस झुन्ड्याउने काम गरे । दोस्रो, लामा न लामा झर्‍याङ बनाएर पहाडमा चढे र बाकस राख्ने काम गरे । तेस्रो, बो जातिसँग अरू कुनै जादुयी उपाय पनि थियो कि ? यी सब अनुमान मात्र हुन्, यी उत्तरले सबैलाई चित्त बुझाउन सक्दैन ।
अब दोस्रो प्रश्न । बो जातिले आफ्ना मृतकको शरीरलाई यस्ता बाकसमा राखेर पहाडमा झुन्ड्याउने कामचाहिँ किन पो गरे ? यसका पनि केही अनुमान छन् । पहिलो, यसरी उचाइमा राख्दा मृतक तिनका देउताको नजिक रहन्छन् । दोस्रो, यसरी मृतकको शरीर राख्दा अरू कुनै जनावरले त्यसमा आक्रमण गर्ने सम्भावना हुन्न । र, यस पछाडि पनि बो जातिसँग जोडिएको कुनै जादुयी कारण थियो कि ? यसमा तेस्रो प्रश्नको शृङ्खला पनि जोडिन्छ ।
यति धेरै वर्षपछि पनि यी कसरी सुरक्षित भए ? कसरी अहिलेसम्म पनि झुन्डिएको झुन्ड्यै भए ? यी सबै प्रश्नबारे पनि अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ, यसले सबैलाई चित्त बुझाउन पनि सक्दैन । जति रहस्य खोज्ने काम भयो, त्यति प्रश्न थपिने काम हुन्छ । गोङका पहाडबारे फर्केयता हामीसँग पनि उत्तरभन्दा प्रश्न बढी थिए । इतिहासमै लेखिएको छ, बो जाति आफैंमा रहस्यमय छ । यिनका मृत्यु संस्कार झनै रहस्यमय । यसलाई रहस्यमय नै रहन देऊ, यो नै सायद हराइसकेको बो जाति प्रति सम्मान हो ।
प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ११:१८